ရူပဗေဒသဘောတရားအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာသုံးစွဲမှုနှင့်ဒတ်ခ်ျဆယ်ကျော်သက်များ၏ခွင့်ပြုထားသောလိင်သဘောထားများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုအလယ်အလတ် (၂၀၁၅) - Your Brain On Porn
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2015 ဧပြီ;44 (3): 743-54 ။ Doi: 10.1007 / s10508-014-0443-7 ။ EPub 2014 ဒီဇင်ဘာ 11 ။
Baams L ကို1, Overbeek, G, Dubas JS, Doornwaard သည် SM, Rommes E ကို, ဗန် Aken MA.
ဒီလေ့လာမှုကမြီးကောင်ပေါက်အလွန်အမင်းလက်တွေ့အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပုံရိပ်တွေကိုရိပ်မိလာသောအခါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာစားသုံးမှုနှင့်အလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်သောပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့၏သုံးလှိုင်း longitudinal နမူနာအနေဖြင့်ဒေတာကိုသုံး ၁၃-၁၆ နှစ်အရွယ်ဒတ်ခ်ျဆယ်ကျော်သက် ၄၄၄ ယောက်။
အပြိုင်ဖြစ်စဉ်ကိုငုပ်လျှိုးနေတိုးတက်မှုနှုန်းမော်ဒယ်ဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကနေရလာဒ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာစားသုံးမှုမြင့်မားကနဦးအဆင့်ဆင့်အလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ၏မြင့်မားကနဦးအဆင့်ကိုသူနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်းပြသ. ထိုမှတပါး, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာစားသုံးမှုတိုးအချိန်ကျော်အလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ၏တိုးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ရိပ်မိသရုပ်မှန်အားဖြင့်ဖြည့်ညှင်းစဉ်းစား, သာပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာရိပ်မိသောသူတို့အဘို့ဤအအကျိုးသက်ရောက်မှုများတွေ့ရှိရ.
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြီးကောင်ပေါက်အဘို့အတွေ့ရှိချက်ကနဦးအဆင့်ဆင့်နှင့်နောက်ဆက်တွဲဖှံ့ဖွိုးတိုးအကြားဆက်ဆံရေး မှလွဲ. အလားတူခဲ့ကြသည်။ လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်ဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပုံရိပ်တွေကိုရိပ်မိသောသူအထီးမြီးကောင်ပေါက်တွေထဲမှာအလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ၏မြင့်မားကနဦးအဆင့်ဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာမီဒီယာများစားသုံးမှုနောက်ဆက်တွဲလျော့နည်းလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်။ ဒီထက်လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်ဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာရိပ်မိသူကိုအထီးမြီးကောင်ပေါက်အဘို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာစားသုံးမှုမြင့်မားကနဦးအဆင့်ဆင့်အလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေတစ်နောက်ဆက်တွဲလျော့နည်းလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားဆက်ဆံရေးအမျိုးသမီးမြီးကောင်ပေါက်အဘို့မတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
ယေဘုယျအားကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုကြောင်းအကြံပြု, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြီးကောင်ပေါက်အတွက်, ရိပ်မိသရုပ်မှန်၏မြင့်မားသောအဆင့်ရှိသူများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာစားသုံးမှုနှင့်အလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေတစ်ဆက်စပ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးပြသခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်နေ့စဉ်အသက်တာ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပြန်ဆိုခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်အတွက်မြီးကောင်ပေါက်ကိုလမ်းပြဖို့ဘယ်လိုပေါ်တိုးချဲ့သတင်းအချက်အလက်များအတွက်လိုအပ်မှထောက်ပြတာပါ။